Wareysi Agaasimaha guud ee Wasaarada Waxbarashada Puntland – DMS
HomeMaqaalloWareysi Agaasimaha guud ee Wasaarada Waxbarashada Puntland
Wareysi Agaasimaha guud ee Wasaarada Waxbarashada Puntland
Wariyaha DALMAR MEDIA ayaa wareysi ku saabsan doorka Wasaaradda Waxbarashada Puntland ku leedahay adeegyadda dowliga ee bulshada wuxuu xafiiskiisa kula yeeshay Agaasimaha guud ee Wasaaradaas Maxamed Cali Faarax (Farmayeeri).
Agaasime Maxamed Cali Faarax ayaa wax laga weydiiyay arrimo kala duwan oo qaarkood la xidhiidhaan sababta Puntland illaa iyo hadda ugu guulaysan wayday in la hirgaliyo waxbarasho lacag la,aan ah muddo 20 sano ka dib.
Sidoo kale Agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Puntland ayaa ka warbixiyay safar ay dhawaan ku tageen deegaano ka tirsan miyiga fog ee Gobolka Nugaal wafti uu hogaaminayo Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sarre ee dowladda Puntland.
Daawo wareysi xiiso leh.
Maxkamadda sare ee Puntland oo go’aan kasoo saari doonta khilaafka Gaas iyo Camay
Waa kuma Jeneral Khaliif Ciise Muddan? oo ah Musharax Madaxweynaha Puntland